Ny finday tavela no nijokoana an’i Bôlô Kely, ny sabotsy teo. Nanao fisafoana ny polisin’Ambohijatovo teny Mandroseza tamin'ny 4 ora maraina, nifanena tamina telo lahy nanosika moto roa eny an-dalana izay nanao tari-dositra ary narian'izy ireo teo ireo moto sy ny kitapony. « Scooter Yamah ZR Evolution » fotsy efa fantatra ny tompony sy « Honda 125 » mitondra ny laharana 1404 TBG izay tsy mbola fantatra kosa ny tompony. Nahitana fanapahana vy sy akanjo ary finday iray ilay kitapo. Tamin'ny alalan'io finday io no nahafahana nanara-dia an'i Bôlôkely nisamborana azy. Nandritra ny famotorana dia niaiky ny heloka vitany izy ary nanondro ireo mpivarotra moto halatra roa lahy, dia i Lala sy Kely, izay samy mbola tadiavina. Tovolahy miisa 4 ihany koa no voasambotry ny polisy miasa ao Antaniavo, ny alahady 12 mey teo teny akaikin’ny « Jovenah Ankazomanga » nangalatra moto sy bisikileta. Bisikileta iray napetraka teo amin’ny parking no nisy naka ka rehefa nokarohin’ny polisy dia teo am-pita ihany no tratra. Araka ny fantatra dia ireto tovolahy ireto no anisan’ireo mpangalatra moto sy bisikileta mipetrapetraka eny amin’iny faritra Ankazomanga iny.